Waa maxay deymin & Maxaad Catholics Fast? – 2kalluunka
Home / Church / Arrimaha / Waa maxay deymin & Maxaad Catholics Fast?
Waa maxay deymin?
Deymin waxaa muddo tukasho iyo soon maahee in horreeyaa Easter. Waxaa afartan maalmood ee la soo dhaafay, laakiin Axadda aan la tirin sida maalmood, bilaabmin si deymin ku saabsan 46 maalmood ka hor Easter. Waayo, Roman Catholics, Deymin bilaabmaa on Wednesday Ash iyo dhamaadaa 3:00 PM on Friday Good–laba maalmood ka hor Easter Sunday. Waa wax yar kala duwan ee Catholics Orthodox ah.
Inta badan dunida reer galbeedka, waxaa loo yaqaan deymin, oo Latin for "afartan maalmood." In Maraykanka, Si kastaba ha ahaatee, waxa loo yaqaan deymin ka dib markii erayga Old English for guga.
Sidaas, Waa Maxay dambas ku saabsan?
In Kitaabka Quduuska ah, gelinaya dambas on mid madaxa muujinaysaa baroor iyo in toobaddii (Job arki 42:6, et al.).
Tilmaamaya dib u erayada Ilaah si Adam in Genesis 3:19, "Waxaad tahay ciidda, iyo ciid baadna ku noqon doontaa,"Dambas waa waanada awood badan oo naga mid ah our dhimashada gaar ah iyo u baahan tahay inaad dembiyadeenna jeedsadaan. Dabcan, calaamada iskutallaabta on our foodda u taagan in aan ka tirsan Ciise Masiix xagga baabtiiska, oo waa ayo rajadayada in aan la wadaagi doona in uu Qiyaame (arki Bawlos Warqad ku socota dadka Roomana 8:11).
tusaale kitaabiga ah calaamad ka mid ah iskutallaabta waxaa laga heli karaa kitaabka Muujintii 7:3, kaas oo ku hadla ee aaminka ah hesho ganaya ilaaliya marka ay foodda. Early qoraallada taariikhiga ah Christian tixraac calaamada iskutallaabta sidoo. Tertullian, ku dhowaad 200 CD, qoray, "In dhammaan falalka caadiga ah ee nolol maalmeedka, waxaan raad ku dul foodda calaamada " (Crown The 3).
Maxaad Do Catholics Fast inta lagu guda jiro deymin?
caadadii ee muddada 40-maalin ee tukasho iyo soon maahee a socota tusaale ahaan Ciise, maalmahan 40y qaatay soon iyo tukasho u cidlada iyo diyaarinta uu adeeggiisa waday, arki Matthew 4:2.
On Ash Arbacada iyo Jimcaha walba inta lagu guda jiro deymin, aaminka ah waxaa loo yaqaan in ay si degdeg ah. Taasi waa, Catholics ku jira caafimaad wanaagsan oo u dhexeeya da'aha 18 iyo 59 waxaa looga baahan yahay in ay cunaan hal cuntada buuxa iyo laba cunto yar (taas oo si wadajir ah ma simanyihiin lahaa cuntada ka buuxa).
Isticmaalka biyo iyo daawo, Dabcan, kuma jiraan soonka.
Soonka waa jimicsi ruuxi ah oo loogu talagalay in ay keenaan hilibka galay soo gudbinta. Sida Saint Paul qoray in uu Letter First in Corinthians ee, "Waxaan pommel jidhkayga oo ka sara mara, waaba intaasoo ka dib wacdiyaya kuwa kale aan qudhayda la qalmin. "
Waxaa jira awood ka sarraysa ku xiran iyagoo sooman marka lagu sameeyaa baxay jacaylka waayo, Ilaah. In Matthew 6:4 iyo 18, Ciise kula taliyay dadka taabacsan inay soomaan oo sadaqo bixiya, ma ay u ansixiyaan dadka laakiin Ilaah "waxa qarsoon arka ayaa kuu abaalgudi doona oo." Markii xertii isaga la weydiiyay sababta ay aysan awoodin in ay ruux shar leh oo dibadda u soo tuuray, Waxa uu ku jawaabay, "Caynkanu wax kale kuma lagu eryi karaa by waxba laakiin tukasho iyo soon maahee" (Mark 9:29). Markaasaa malaa'igtii muuqday in Korneeliyos in Acts Rasuulladu, 10:4 muujin isaga, "Baryooyinkaaga iyo sadaqooyinkaaga waxay aad u baxeen xusuus ah Ilaah hortiisa."
Maxaad Do Catholics u egna ka fogaada Eating Hilibka Jimcaha ee deymin?
On Ash Arbacada iyo Jimcaha walba inta lagu guda jiro deymin, Catholics 14 sano jir iyo wixii ka weyn waxa loo yaqaan inaad ka fogaataan cunista hilib. Sida laga soo xigtay Sharciga Canon, dhab ahaan, Catholics waxaa loo yaqaan in ay ka fogaadaan hilib (ama ficil ah oo u dhiganta of Falsau) on Friday kasta sanadka oo dhan.1
Awoodda Church ee in la sameeyo sharciyo ku qabanaya aamiinka uu ka yimaado Masiix qudhiisa, kuwaas oo uu sheegay in ay Rasuulladu in Matthew 18:18, "Wax alla wixii aad dhulka ku xidhaan ayaa jannada ku xidhnaan doona; wax alla wixii aad dhulka ku furnaan doona jannada ku jira. " (Waxa uu u sheegay in Peter, sidoo kale.)
Sida dhammaan shuruucda Kaniisadda, cuntola'aan ka hilib on Friday aan la adkeeyey inuu ahaado culays noo, laakiin inaad noo keeno dhaw in ay Ciise. Waxa ay ina xusuusinaysaa in, inta maanta ee toddobaadka on Ciise gaaray iyo u dhintay dembiyadeenna.
In uu Letter First in Timothy 4:3, Saint Paul cambaareeyey kuwa "yaa naga fogeeyo guurka iyo Fara ee ka dheerow cuntooyinka." Qaar ka mid ah ayaa si qaldan aayaddan inuu xukumo dhaqannada Catholic of Celibacy oo ka dheerow ka hilib.
In tuducdan, In kastoo, Paul ahaa ku tilmaamayaa in Gnostiga ah, kuwaas oo hoos u eegay on guurka iyo cuntada sababtoo ah waxay la aaminsan yahay dunida jirka xun. Catholics, dhanka kale, ma waxay aaminsan yihiin in dunida jirka waa shar. Qaar ka mid ah Catholics sameeyo dhaqanka Celibacy, laakiin hadday dhammaantood wax Catholics ku dhaqma Celibacy, waxaa waqti dheer ka hor ay noqon lahaayeen ma Catholics–sida welina u.
Si lid ku ah, waxaan aragnaa sida is-control sida hadiyado ka timaada Ilaaha sida Bawlos wuxuu u qoray aayaddan soo socota warqaddii la mid ah (4:4). Oo weliba waxaan iyaga ka fogaataan ka waqtiyada qaarkood iyo shuruudo gaar ah si ay u muujiyaan in aan Ilaah jecel ugu horrayn waxa weeyi wax abuuray wax kasta ka sarreeya.
Soonka, cuntola'aan iyo allabaryada yar kale oo aan ku bixin inta lagu guda jiro deymin, ma yihiin ciqaab, laakiin fursado na si buuxda u jeesan dunida oo dheeraad ah xagga Ilaah–in ay bixiyaan iyagoo u ammaan iyo mahadnaqid naftooda our dhan, jidhka iyo xagga ruuxa.
Code of Law Canon 1250: "Dhamaan Jimcaha iyada oo sanadka oo wakhtigii deymin waa maalmo penitential iyo jeer oo dhan Church oo dhan." ↩